Yako Email Kushambadzira Kuedza Hazvinei Kana Iwe Hausi Wekufambisa Akagadziridzwa | Martech Zone
Yako Email Kushambadzira Kuedza Hazvina Basa kana Iwe Usiri Nhare Yakagadziridzwa
Svondo, Nyamavhuvhu 31, 2014 China, Kurume 3, 2016 Douglas Karr
Sezvo isu tanga tichitsvaga kuti tivandudze kuita kwedu, chinhu chekutanga chatakaita ndechekuteerera anoteerera maemaema matemplate tichishandisa chikuva chedu, CircuPress, kugovera zvirimo (Nyorera zuva nezuva kana vhiki). Iko shanduko muhuwandu hwakanga husiri chinhu ipfupi nekushamisa. Isu tinotumira email yedu yevhiki nevhiki kune vanopfuura 70,000 vanyoreri neMuvhuro needu analytics inotiratidza iyo ndiyo spike mumugwagwa wedu kupfuura chero imwe svikiro kana kukwidziridzwa.
Izvo hazvina kuitika kudzamara maemail edu akagadziridzwa kuti vatarise nhare, zvakadaro! Iyo yakachena, imwechete-ikholamu dhizaini ine nyore kudzvanya makuru mabhatani uye zvinongedzo zvakaita mutsauko wese mukusundidzira vanhu kubva kuemail kudzokera kuzvinyorwa. Iye zvino tave kushanda pane resezve dhizaini yeblog kuitira kuti ipe yakanaka, inoteerera ruzivo kuburikidza nedesktop, nhare kana piritsi.
Uchida kana kwete, kushandisa nharembozha kwave kwechipiri hunhu kwatiri. Nyika yakanaka uye inofamba zvechokwadi. Vatengi vari kuzvibata zvakasiyana pamafoni efoni uye mapiritsi, ayo anopa akasiyana mashandiro uye kugona, uye kumabhizinesi mazhinji izvi zvinoreva kuti vanogona kutanga kuona vamwe vevatengi vavo vachifamba kana kushambadzira kwavo nhare kusiri kukwenya. Kuve neinoshanda nhare mbozha munzvimbo yakakosha kuchengetedza vatengi kudzoka. Ciaran Carlisle, RatidzaBlock
Huwandu hwacho hahushomeka pane hunoshamisa nharembozha… kana email yako kana saiti yako isiri yakanaka mushandisi ruzivo pane mbozhanhare, urikukanda tani yekushambadzira kwako kushambadzira kure. Heano ma3 manhamba ako:
Nharembozha email inovhura yakura 180% mumakore matatu chete kubva pa15% kusvika pa42%!
Kurume 68% yeGmail uye Yahoo! anovhura kuitika pane smartphone kana piritsi.
75% emaemail anoonekwa pane nhare mbozha angangodzimwa kana isina nhare yakagadziridzwa.
Tags: email kushambadza statsemail yakazaruka mweroemail statsYeMahara neThebhu Kushambadziranharembozha emailnhare inopindura emailinoteerera emailsmartphonesmartphone emailpiritsi email
Kana Iwe Uri Kuunganidza Dhata, Wako Mutengi Ane Izvi Zvinotarisirwa
Maitiro Ekutyaira Bhizinesi ne Twitter uye Akasimudzira Tweets
Sep 6, 2014 pa 1: 00 AM
Icho chakanyanya kushamisika chokwadi chekuona kuti vazhinji vevashandisi vema smartphone vanovhura maemail pane ake / nhare mbozha !!!